နှလုံးသား ဒိုင်ယာရီ: အမွေ
တိုက်ပွဲဆီ ရဲရဲ ငါချီတက်ခဲ့တယ်
ဘာမထီ လာနီတဲ့ စစ်သွေး
( နက်ဖြန်၂၇.၃.၂၀၁၃မှာ ကျရောက်မဲ့
တကယ်ဆိုမိုးနတ် ကဗျာအသစ်တွေတင်ဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တာ ကြာပေါ့....
၂၁ ရက်နေ့ ကမ္ဘာ့ကဗျာများနေ့တုန်းကလဲ အမှတ်တရ
တင်မယ်ဆိုပြီး မတင်လိုက်ရဘူးးးးးးးး မိုးနတ် အလုပ်တွေအရမ်းရှုပ်ပြီး
ဇက်ကြောကလဲ အရင်ထက်ပိုပြီး ပြန်တက်လာလို့ အာရုံကြောဆေး
ပြန်သောက်နေရသလို ဆေးတွေလဲ လိမ်းနေရတယ်....
အဲလို အခြေအနေတွေကြောင့် မိုးနတ် အသစ်တွေ
တင်ချင်ပါရက်နဲ့ မတင်ဖြစ်ရတာကို နားလည်ပေးကြလိမ့်မယ်လို့
ထင်ပါတယ်.....အစကတော့ မိုးနတ် စိတ်ပျက်ပျက်နဲ့ ဘလော့လေးကို
ဒီအတိုင်းပဲပစ်ထားလိုက်တော့မလို့..... တကယ်ကို အဲလိုကြီးကို
ခေါင်းမူးတဲ့ဒဏ်ကို မိုးနတ်မခံနိုင်ဘူးးးးးးး တကယ်က
ကွန်ပြူတာသုံးတဲ့ တခြားဘယ်သူမှလဲ ခံနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးးးးးးး
အတော်ဆိုးတဲ့ အညောင်းထိုင်ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ
အကျိုးဆက်ကိုးးးးးးးးး ဒါပေမဲ့လဲလေ ဒီလောက် အိမ်လေးကို
ခင်တွယ်တဲ့သူက ကျန်းမာရေးကြောင့် အလွယ်တကူ
ဖဘတို့ ဂျီတော့ ဂျီးမေးတို့သာ မဖွင့်ရင်နေမယ်......
အိမ်လေးကိုတော့ နေ့တိုင်းဝင်စစ်ပြီး တတ်နိုင်သရွေ့အိမ်လည်လဲ
မပျက်ကွက်အောင် ဂရုတစိုက်ရှိနေမိတာက သက်သေဖြစ်နေသလိုပဲ...
မိုးနတ်ရင်ထဲက တကယ့်စေတနာပါ) ....
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ကိုယ်ဘာလေးပဲ ရေးရေး .....
ကိုယ်ရေးထားတာလေးကို တစ်ယောက်မဟုတ် တစ်ယောက်က
ချီးမွမ်းစကားဆိုတာကိုတော့ ခံချင်ကြမှာပဲ....နောက်ဆုံး ချီးမွမ်းစကား
မဟုတ်ရင်တောင် သာမန်ကာလျှံကာလေးပဲ ကောင်းတယ်လို့
ပြောပြော သဘောကျနှစ်ခြိုက်နေမိကြမှာ အသေအချာပါ...
အဲ့ဒါကြောင့်လဲ ချန်ခဲ့တဲ့ ကွန်မန့်လေးတွေကို တခြားဘယ်အရာနဲ့မှ
လိမ်လည်ဟန်ဆောင်ပြီး မကောင်းလဲ ကောင်းတယ်ပြော
မကြိုက်လဲ ကြိုက်တယ် ပြောရမယ် မဆိုလိုပါဘူးးးးးးး
မိုးနတ်အတွက်ကတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဝေဖန်ပေးကြပါ...
လေးစားစွာနဲ့ လက်ခံနာယူပေးမှာပါ....အဲလို သင်ပြပေး ဝေဖန်ပေးမှ
မိုးနတ်တို့လို အသစ်တွေက တိုးတက်လာအရည်အချင်းရှိလာမှာပေါ့.....
အဲ့ဒါနဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တာကို စဉ်းစားပြီး ခုလက်တွေ့
တစ်ပတ်တခါလောက် ကဗျာအသစ်တွေ တင်ပေးပါ့မယ်......
ဒါပေမဲ့ ဘယ်မောင်နှမတွေဆီကိုမှတော့ အိမ်လည်
မလာနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်....အကြောင်းက ဆရာဝန်က မိုးနတ်ကို
တတ်နိုင်သရွေ့ပေါ့....ဖြစ်နိုင်ရင် တလလောက်ကို ဆက်တိုက်
ကွန်ပြူတာ မသုံးပဲ နားနေစေချင်တာ......အဲဒါကို မိုးနတ်က
ချိုးဖောက်ပြီး တပတ်တခါလောက် အသစ်တင်ပေးကြည့်မလို့ ....
တကယ်က ပို့တွေကို အစဉ်အတိုင်း တပတ်တခါ သူ့ဘာသာသူ
တင်သွားဖို့ စီစဉ်ထားလို့ရပါတယ်....ဒါပေမဲ့ ....ပို့စ်အသစ်တင်တာကို
အကြောင်းပြုပြီး မိုးနတ် အိမ်လေးကို ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်လာပြီး
အရိပ်ကြည့်လို့ရတာပေါ့......မိုးနတ်က သူ့ကို သိပ်ချစ်တာလေ...
အပျောက်မခံနိုင်အောင် ချစ်မိပေမဲ့ ကျန်းမာရေးက
ရေရှည်အတွက် အဆင်ပြေနိုင်မယ် :PPPPPPPPPPP
အာ့ကြောင့် မိုးနတ် ထပ်ပြီးတောင်းပန်ချင်တာက မိုးနတ်
အိမ်လည်တွေ ပြန်လာနိုင်မှ အားလုံးရဲ့ စာကြွေးတွေကို
ဒီခဏ အတွက်တော့ နှမ လက်လျှော့လို့ နေရင်း
ဒီညအတွက် အားလုံးကို GoOd NiGhT ပါ :P
See U Next Weekkkkkk
Arr Bwarrrrrrrrrr :)
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 9:19 AM
မောင်ဘုန်း March 26, 2013 at 9:34 AM
ဟုတ်ပ ...... မနက်ဖြန် တပ်မတော်နေ့ ပဲ .... ။ ကျန်းမာရေးလည်း ဂရုစိုက်ပါ မိုးနတ်ရေ ... ။
ဟန်ကြည် March 26, 2013 at 11:21 AM
အင်း အကုန်မေ့ကုန်ပါပြီကွယ်...ဦးဟန်ကြည်တစ်ယောက် လောကနဲ့မဆိုင်ဖြစ်နေတာ ကြာပါပေါ့လားး)
witch83 March 26, 2013 at 6:45 PM
No worries, please just take care of your health. I still will visit your blog and support you. ;)
Ma Tint March 26, 2013 at 7:36 PM
မိုးညချမ်း March 26, 2013 at 8:08 PM
မမရေ ... ကျန်းမရေးဂရုစိုက်နော် ... အထူးသဖြင့် မျက်လုံးပဲ ... ကွန်ပျူတာသမားတွေက များသောအားဖြင့် မျက်လုံးအတော်ထိခိုက်ကြတယ် ... အထူးဂရုစိုက်ပါနော် ... ကဗျာလေးတွေကို အဆက်မပြတ်ဖတ်နေရမယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာမိပါ၏ ... မိုးညလည်း မမကို သတိရနေပါတယ်နော် ... အာဘွားစ်စ်စ် ... :)
နွေလ March 27, 2013 at 4:42 AM
ကျန်းမာရေးကို အရင်ဆုံး ဂရုစိုက်လိုက်ပါ
အာရုံကြောတွေနဲ့ ဆိုင်တာတွေ သိပ်တော့ မကောင်းဘူးရယ်
ကျန်းမာရေးကို ပထမ ဦးစားပေးပါဗျာ
ကျန်းမာမှ ကိုယ် လုပ်ချင်တာ လုပ်လို့ရမှလေ ဟုတ်ဘူးလား
မကြီး အမြန်ဆုံး သက်သာပါစေဗျာ
hninnse young March 27, 2013 at 5:37 PM
ကွန်ပျူတာလဲသုံး ကျန်းမာရေးလဲဂရုစိုက်ပါကွယ်... အစစအရာရာ အဆင်ပြေ ငြိမ်းချမ်းပါစေ...
ကဗျာလေးလဲ ခံစားသွားတယ်နော်...း)
Thu March 27, 2013 at 8:15 PM
Take care sis lay!!
ရွှေအိမ်စည် March 28, 2013 at 2:30 AM
အွန်လိုင်းသုံးနေတဲ့သူတွေ ကြုံနေရတဲ့ ဒုက္ခချင်းတူတူမို့ ကိုယ်ချင်းစာတယ်
တကယ်တော့ ဆေးတွေသောက်နေရချိန်ဆို ဆရာဝန်ပြောသလို ကွန်ပြူတာ မကြည့်ဘဲ ဆေးမှန်မှန်သောက်၊ စိတ်ရော လူရော နားပစ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါ..။
ခက်တာက တို့တတွေမှာ မနေနိုင်တဲ့ သံယောဇဉ်တွေက ရှိနေတော့....
ဂရုစိုက်ပြီး အမြန်ဆုံးကျန်းမာအောင်နေပါလို့ပဲ ပြောချင်တယ် ညီမလေးရေ... :) ။
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) March 30, 2013 at 11:41 AM
နေမကောင်းရင်လဲ ဘလော့လေးကို ရန်ရှာကြတယ်။
ချစ်သူနဲ့ အဆင်မပြေရင်လဲ ဘလော့လေးကို ရန်ရှာကြတယ်။
စိတ်တွေ အရမ်းညစ်နေရင်လဲ ဘလော့လေးကို ရန်ရှာကြတယ်။
ဘလော့လေးကို ပစ်ထားလိုက်တော့မယ် ဆိုတာချည်းဘဲ။
ပစ်ထားရဲ ပစ်ထားကြည့် သူကြီးမင်း တောင်ဝှေးစာ မိသွားမယ်။
ရိုးမြေကျ March 31, 2013 at 11:08 PM
မိုးနတ်ရေ ညီမလေး ဇတ်ကြောတက်ရင် Fame က ထုတ်တဲ့ မျက်စိအားဆေးသောက်ပါလား။မမလဲ အဲဒီဆေး တစ်နေ့နှစ်လုံးသောက်တယ်။ ကွန်ပျူတာကိုင်တဲ့သူက ရေရှည်မှာ မျက်စိအတွက် ကာကွယ်ထားမှာဖြစ်မှာလေ။ အာရုံကြောဆေးတင်မဟုတ်ဘဲ မျက်စိဆေးပါသောက်သင့်တယ်ညလေးမိုးနတ်ရေ။ ဂရုစိုက်ပါ။။။။
မိုးနတ်ကြယ်စင် April 2, 2013 at 8:18 AM
ဟုတ်ကဲ့ပါ အကိုမောင်ဘုန်းရေ.... * မောင်ဘုန်း *
ဂရုတစိုက်ရှိတာ ကျေးဇူးပါ အကိုတော် :)))
ဦးဦး * ဟန်ကြည် * ရေ....တခါတခါတော့လဲ အဲလိုပါပဲရှင် :)))
အိုးးးးးးးးး မမ * witch83 *
အားကိုးရတဲ့ နာ့အမရယ် အာ့ကြောင့်
ညလေးက အာဘွားပေးပါဒယ် ဟီးးးးးးးးးး
တီတင့်ပေးတဲ့ဆုနဲ့ မိုးနတ် အမြန်ဆုံးပြည့်ချင်ပါတယ် :) * တီတင့် *
တီတင့်ရော နေကောင်းပါရဲ့လားရှင်....မိုးနတ်က တီ့ကို
အရမ်းပဲ သတိရနေပါတယ်နော် :)))
မိုးနတ်လဲ တူတူပါပဲ မိုးညရယ် :P * မိုးညချမ်း *
ချစ်မောင်ရေး ပြောတဲ့ စကားကို အမနားထောင်ပါ့မယ်ဟယ် * နွေလ *
ဟုတ်ကဲ့ပါ မမ * မမနှင်းဆီရောင် * ရေ .....
* အသူ * ရေ....
ဒါဆို မိုးနတ်ရဲ့ အသူလေးက မိုးနတ်ထက်လိမ္မာတာပေါ့နော်.....
မိုးနတ်ကတော့ မိုက်တယ်ရှင့် :(((
မမ * ရွှေအိမ်စည် *
ကျေးဇူးလဲ တင်မိပါတယ် မ ရယ် :)))
မ လဲ နေကောင်း အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေနော် :)))
ဟုတ်ကဲ့ပါ * သူကြီးမင်း *
ဘာလို့ဆို မိုးနတ် ဘလော့ဂါ
ကိုကိုမောင် ဆိုတဲ့ လူကြီးပေါ့
ဟုတ်လား ချစ်မ * မမရိုးမြေကျ *
ဆေးညွှန်းပေးတာ ရှဲရှဲနိ :)))
ဒါထက် မ ကိုညလေး သိပ်သတိရတယ်...
ဘာလို့မှန်းတော့ မသိဘူး မ ရယ်
roseayemaung April 3, 2013 at 11:36 PM
စာလေးတစောင်ပို့ပေးပါအုံး.ချစ်တဲံ..့..နှင်းဆီ ရဲ့ ...မိုးနတ်
ညီလင်းသစ် April 4, 2013 at 3:36 PM
ခုတလော ပျောက်နေပါတယ် အောက်မေ့တာ ညီမမိုးနတ်က နေမကောင်း ဖြစ်နေတာကိုး..၊ ဟုတ်တယ်နော်..၊ ခေါင်းမူးတာ၊ ဇက်ကြောတက်တာ.. စတာတွေက လူတိုင်းဖြစ်ဖူးကြလို့ ဘာမှမဟုတ်သလို ထင်ရပေမယ့် တကယ်ခံရတဲ့အခါ အတော့်ကို ဆိုးတာ၊ သက်သာ ပျောက်ကင်းသွားအောင် ဆရာဝန် ပြောတဲ့အတိုင်း နားနားနေနေ နေပါ ညီမရေ..၊ စာတွေက နေကောင်းမှ လိုက်ဖတ်လည်း ရပါတယ်လေ...၊
တိုတိုလေးပေမယ့် ရဲရဲတောက်နေတဲ့ ကဗျာလေးကိုလည်း သဘောကျစွာနဲ့ ဖတ်သွားခဲ့တယ်နော်..။
မိုးနတ်ကြယ်စင် April 6, 2013 at 7:58 AM
အော် နှင်းဆီလေးရယ်.... * နှင်းဆီအေးမောင် *
မိုးနတ် အခြေအနေကလဲ အဲလို အဲလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကာ
စာတော့ ရို့စ်ဆီ မပို့ပေးနိုင်တော့ဘူးးးးးးးးးးး တစ်ပတ်တစ်ခါ
အာ့ကြောင့် အရမ်းသတိရနေတယ်ဆိုတာပဲ ပြောရင်း
ရေးပြီးသားတွေက အများကြီးရှိတယ် ရို့စ်ရဲ့....
အို အကိုညီလင်း * ညီလင်းသစ် *
မိုးနတ်ကို သတိတရရှိလို့ အရမ်းဝမ်းသာမိတယ် တကယ် :)))
ညီမလေးလဲ မောင်နှမတွေ အားလုံးကို အရမ်းသတိရတယ်...
အကိုတို့မိသားစုဝင်တွေ အားလုံးရော နေကောင်းကြတယ်
မဟုတ်လားးးးးးးးးးးးးး ??? ဟိုမှာတော့ ရာသီဥတုက
ပူတယ် အကိုရ.....နောက်ပြီး ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တွေ
လက်ရှည်ပါးပါးကလေးဝတ်ပြီး ထီးကို မဖြစ်မနေဆောင်း
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားလေးပုံတွေကို ညလေးပြန်လာ
နောက်မှ လိုက်ဆပ်ရင်း အိမ်လည်လာလို့ရပါတယ်...
ကျန်းမာရေးကသာ ပိုပြီးအရေးကြီးတာမို့ ညီမလေးလဲ